Impendulo kuLuhlu lwezoKholo neNzululwazi-Rabbi Michael Avraham
Impendulo kuLuhlu loKholo neNzululwazi
Iimpendulo > Udidi: Ukholo > Impendulo kuLuhlu loKholo neNzululwazi
P. Ubuzwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Shalom Harav kumxholo wothotho lwesayensi kunye nokholo olwabhalwa ngurabhiynet URabhi wasebenzisa Kwimbono ye-physico-theological
Ndambuza: Ngokolwazi lwam, kukho ukuthandabuza kobu bungqina, kuba intetho malunga nesizathu sokuqala yintetho malunga nemeko engaphambi kokwenyani kwaye le meko ayizibophelelanga kumthetho wenyaniso yethu .. ngoko Ndiyaqonda ukuba ayibobungqina
Ndingathanda impendulo enkosi.
UMichi Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ukuba ndiwuqonde kakuhle umbuzo wakho, eneneni ubuza ukuba siyintoni na isiseko sokucinga ukuba umgaqo we-causality oyinyani ngobunyani bethu wawuyinyani nangaphambi kokudalwa kwehlabathi (kuba ngamandla alo siye sangqina ukuba wadalwa ngabathile. unobangela). Impendulo yam kukuba umgaqo we-causality akufanele ube yindawo yexesha, kodwa mhlawumbi yeentlobo zezinto. Izinto ezaziwa kuthi zivela kwihlabathi ayisiyiyo imbangela ngokwazo kodwa zidalwe yinto / umntu, ngoko ke umgaqo we-causality malunga nabo. Ezinye izinto zinokungadingi sizathu. Izinto ezisehlabathini lethu zadalwa kwindalo, kwaye kubo umgaqo we-causality usebenza kungakhathaliseki ixesha. Ngaphaya koko, nakwihlabathi lethu umgaqo we-causality ayisosiphumo sokuqwalaselwa okulula kodwa yingcinga ephambili. Ke akukho mqobo ekuyisebenziseni kwezinye iimeko / amaxesha ngokunjalo.
P. Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ukusuka kwinxalenye yesibini yempendulo ndiyaqonda ukuba yi-priori (o.k.t. ixhomekeke kulwazi) kwaye iyinyani phambi kokwazi komntu.
Oko kukuthi, yonke into exhomekeke kwingqondo yomntu ifakwe kwi-causality kwaye kodwa yonke into ekhoyo ngaphambili ayibandakanyi kwi-causality.
Ngokwale nto andibuqondi ubungqina.
UMichi Abasebenzi	Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Kunzima kum ukuxoxa ngamaxesha anjalo. Ubungandiqondi kakuhle. Andiphikisi ukuba umgaqo we-causality uxhomekeke. Ingxabano yam yeyokuba yinjongo, kodwa ichaphazela izinto kumava ethu hayi ezinye izinto. Kodwa ngokubhekisele kwizinto ezikumava ethu ziyinyani ukuba zisebenza nangaphambi kokuba umntu abekho nangaphambi kokuba umhlaba udalwe (okanye kunoko: malunga nomzuzu wokudalwa ngokwawo). Into endiyithethileyo kukuba umgaqo we-causality awuphumi ekubonweni kodwa kwisizathu esiphambili, kodwa asiphikisani nokuba sichaphazela izinto eziphathekayo (ezi kumava ethu) kwaye kungekhona yonke into.
Abahlobo bakhe Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ngokutsho kukaRabi isiseko sakhe sivela kuqwalaselo lwangaphandle lwengcamango ye-causality okanye into enjalo.
Ngoko ngubani owayidalayo? 🙂
Lowo wadala yonke into
Shonra umhambi Uphendulwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Ukuba ihlabathi lalidalwe ngolo hlobo ngaphandle kwesizathu, kutheni ezo ngxaki zingenzeki nanamhlanje?
Yhoo ndaphinda ndangena kwi keyboard ndafumana impendulo.
Ngokuzithoba, Shunra Katolovsky